होमपेज / नागरिक शनिबार / एउटा खुट्टाले छमछमी
एउटा खुट्टाले छमछमी	27 Jul 2013 १२ श्रावण, २०७०
अमृत भादगाउँले Be the first to comment! 12345 (0 votes)
जब उनी स्टेजमा कम्मर मर्काउँछिन्, तब दर्शकमाझ तालीको पर्रा छुट्छ। दर्शक कोही गीत गुनगुनाउँछन् त कोही सुसेल्न थाल्छन्। स्वदेशदेखि विदेशसम्म इटहरीकी रोमा न्यौपानेको नृत्यले वाहवाही पाउँदै छ। नाच देखाउन वर्षैभरि निम्तो आइरहन्छ। कहिले गाउँ–सहरका महोत्सवमा, कहिले विद्यालयका कार्यक्रममा त कहिले संस्थाका वार्षिकोत्सवमा। आधुनिक, क्लासिकल, लोक र राष्ट्रिय गीतमा नाच्छिन् उनी। 'मेरो बारुली कम्मर लचक्कै, नेपालकी छोरी हुँ म, आज बाह्र हाते पटुकीले, रेली खोला बगर, खुट्टा तान्दै गर'जस्ता गीतमा। गुन्यु चोलीमा छमछमी नाचेको देख्नेहरू उनको एउटा खुट्टा छैन भन्ने पत्तै पाउँदैनन्। उनको देब्रे खुट्टा छैन, दाहिने खुट्टाका भरमा नाच्छिन्। पछिल्लो समय शारीरिक अपांग साथी हिमाल अर्याल (जो ह्विल चेयरमा बस्छन्) सँग 'बुद्धम् शरणम् गच्छामी' बोलको गीतमा नाच्दै आएकी छिन्। यो गीतमा नाच्दा दर्शकका आँखा रसाउँछन्। उनले इजरायल, कोरिया, मलेसिया, कुवेतका साथै भारतका धेरै सहरमा आफ्नो प्रतिभा देखाइसकिन्। आउँदो अगस्ट ६ मा कतारमा र १५ मा बेल्जियममा नाच्दै छिन्। त्यसको तयारीका लागि रोमा अहिले गुरु केशव सापकोटासँग दुई नयाँ गीतको अभ्यासमा व्यस्त छिन्। पाँच वर्ष भयो सिक्न थालेको। त्यसभन्दा पहिले घरमै ऐनाअगाडि आफैं नाच्न सिक्थिन्। उनले सार्वजनिक कार्यक्रममा नाच्न थालेको एक दशक भयो। पहिलोपटक प्रज्ञा भवनमा 'गुराँस फुल्दा वनै घमाइलो' बोलको गीतमा नाच्दा दर्शकतिर हेर्न सकिनन्। भुइँमा हेरेर एक खुट्टाले नाचेपछि अप्रत्याशित रूपमा दर्शकको माया पाइन्। 'त्यो दिन दर्शकबाट टिप्स आठ सय रुपैयाँ पाएँ,' उनलाई हौसला मिल्यो, 'त्यसपछि नाचमा मेहनत गरिरहेको छु। अहिले नाच्दा दर्शकलाई आफूतिर तान्न सक्ने भएकी छु।' केशव गुरुको संगतले धेरै मद्दत गर्योन। 'म शारीरिक अपांग भएकाले पहिला नाच हेर्नेहरू बिचरा भनेर सहानुभूति देखाउँथे,' २८ वर्षीया न्यौपानेले भनिन्, 'अचेल नाचमा निखार आएकाले सहानुभूति भन्दा पनि कलाप्रति सम्मान दर्शाउँछन्।' स्वदेशमा भन्दा विदेशबाट राम्रो कमाइ हुने उनको अनुभव छ। 'विदेशमा एउटा कार्यक्रममा तीनटा नाच देखाएबापत ५० हजार रुपैयाँ लिन्छु,' उनी भन्छिन्, 'तर फर्कंदा साथमा दुई–तीन लाखभन्दा बढी नै हुन्छ, दर्शकले राम्रो टिप्स र गिफ्ट दिन्छन्।' नाचेर दालभातको जोहो होला भन्ने उनले कल्पनै गरेकी थिइनन्। जन्मथलो इटहरीबाट जीवन संघर्षका लागि काठमाडौं पसेपछि २०६० सालमा स्टेजमा नाच्ने अवसर पाइन्। २०६२ को नयाँ वर्ष नै उनका लागि जीवनको नयाँ मोड बनिदियो। टुँडिखेलमा देखाएको उनको नृत्य इजरायली राजदुतले खूब मन पराए। चलचित्र विकास बोर्डले आयोजना गरेको कार्यक्रमका अतिथि राजदुत डन विन एलिजरले उनलाई भोलिपल्टै दुतावास आउने निम्तो दिए। जीवनसाथी चिरन पोखरेलसँग उनी दुतावास पुगिन्। राजदूतले इजरायलमा खुट्टाको उपचार र नाच देखाउने चाँजो मिलाइदिए। महिना दिन उपचारपछि उनमा नक्कली खुट्टा हालियो। उनी नेपाल फर्किइन्। नाच्दा नक्कली खुट्टा लगाउन मिल्दैन। अघिपछि उनी लगाउँछिन्। धेरैजसो बैशाखीकै भरमा हिँड्न रुचाउँछिन्। भन्छिन्, 'सानैदेखि प्रयोग गरेकाले बैशाखी नै सजिलो लाग्छ।' उनले पतिसँग मिलेर भर्खरै काठमाडौंको ठमेलमा कोजी क्याफे एन्ड रेस्टुरेन्ट सुरु गरेकी छिन्। त्यहाँ तीन जना शारीरिक अपांगलाई काम दिएकी छिन्। रोमाले केही म्युजिक भिडियोमा अभिनय गरेकी छिन्। उनलाई गतिलो विज्ञापनमा खेल्न मन छ। 'सकुन्जेल नाच्छु,' भविष्यका योजना सुनाउँछिन्, 'अपांगता भएकाहरूको हितमा पनि काम गर्दै जान्छु।' दुर्घटनामा खुट्टा गुम्यो रोमा आठ वर्षको उमेरमा अपांग भइन्। इटहरीको जनता माविमा कक्षा एक मा पढ्थिन्। दिदीहरूसँग स्कुल जाँदा गाडीले किच्यो। देब्रे खुट्टा बेकामे भयो। छ महिनासम्म विराटनगरस्थित कोसी अस्पतालमा बस्नुपर्योज। पछि बैशाखी टेकेर स्कुल जान थालिन्। एसएलसीपछि साथी चिरनले काठमाडौं बोलाए। उनी आइन्। कम्प्युटर सिक्न थालिन्। त्यत्तिकैमा नाच देखाउने मौका मिल्यो। शुभेच्छुकले हौस्याएपछि उनमा आत्मविश्वास बढ्यो। मेहनत गर्दै गएपछि उनी राम्रो नृत्यंगना बनिन्। 'शारीरिक अपांगलाई दया होइन अवसर चाहिएको छ,' उनी भन्छिन्, 'मेहनत, आत्मविश्वास र लगनशीलता भयो भने सफल भइन्छ।'	Tweet Leaveacomment Message *
यत्ति पनि भएन !लन्डन बस्ने रोशन राईलाई म चिन्दैनथेँ। उनले पनि मलाई चिन्दैनथे। तर पनि केही वर्षपहिले उनले मेरो फेसबुकमा एउटा सन्देश पठाए। उनले जोगीमाराका सानी प्रजा र कमनमाया प्रजाको फोटो खिच्ने फिल्म...	'पर्खन्छौं तर खोइ विकल्प?'काठमाडौं- भक्तपुरको सूर्यविनायक बस स्टपमा थुप्रै यात्रु बस पर्खंदै छन्। कोही हतारमा देखिन्छन्, कोही तनावमा। एक युवक परबाट सरर साइकलमा आए। बस पर्खेर बसेकातर्फ नजर घुमाए, मुस्कुराउँदै अघि बढे।	तिहारमा अभावको उल्झनकहिल्यै नसुक्ने तेलको घेरा लगाउने दिदीबहिनीको मन यसपटकको तिहारमा फुस्रो भएको छ। सप्तरंगी टीका फिक्का लाग्दैछ। मनलाग्दो परिकार पकाएर खान, दाजुभाइलाई खुवाउन चुलो बल्न सकेको छैन। त्यसैले चाडबाडमा समेत जेनतेन...	ओपिडीमा भेटिँदैनन् डाक्टरबिहीबार दिउँसो १ बजे।भेरी अञ्चल अस्पतालको बरन्डा र कोलियाभरि बिरामीको खचाखच छ। ओपिडी कक्षमा बसेका अस्पतालका सहयोगीहरूलाई बिरामीले डाक्टर कतिखेर आउँछन् भन्ने प्रश्न सोधेर हैरान पारिरहेका छन्। कुनै कक्षका सहयोगी...	स्कुलदेखि नै लडाकुपन२०४६ को आन्दोलनदेखि ०६२/६३ को गणतान्त्रिक आन्दोलनसम्म सधैँ अग्रमोर्चामा कस्सिएर उत्रिने उनको प्रहरी लाठीले धेरैपटक टाउको फुट्यो, कहिल्यै पछि हटिनन्। नेकपा (एमाले) मा मात्र होइन, युवा नेतृ रामकुमारी झाँक्री नेपाली...	बोडे टु बाल्टिमोर नो इङ्लिस!भक्तपुर बोडेका सुरेन्द्र प्रजापती र दिललक्ष्मी प्रजापती दोस्रोपटक अमेरिका जाने तयारीमा छन्। बोडेचोकमा मिठाई पसल चलाउँदै आएका यी दम्पती अध्ययनको सिलसिलामा अमेरिकामा रहेका जेठो छोरो र कान्छी छोरी तथा क्यानाडामा...	पुनर्निर्माणको सङ्घर्ष७ दशमलव ८ रिक्टर स्केलको भूकम्पले देश हल्लाएको नौ महिना भयो। भूकम्पबाट करिब नौ हजार मानिसले ज्यान गुमाए भने २२ हजारभन्दा धेरै घाइते भए। देशले सात खर्बभन्दा धेरै रुपैयाँ भौतिक...	मिथिलामा जनक दर्शनराजा जनकले हलो जोत्दा सीता भेटिएको कथा सानैमा पढेका थियौं हामीले। अनिकाल भएकाले राजाले हलो जोत्दा सहकाल आउने विश्वासले हलो जोतेका। राजा जनक र सीता माताको जन्मथलोमात्रै होइन जनकपुर, 'जनक...	नागरिक शनिबार	कम्प्युटरको देवत्वकरणठमेलको पुराना पुस्तक बेच्ने पसलबाट ल्याएको एउटा चाङमा पातलो म्यागेजिन भेटियो। त्यो 'स्मरण' नामक कम्प्युटर विशेषांक...	खण्डहरमा कला पछ्याउँदैदोलखा, गैरीमुदीका छविलाल श्रेष्ठ गाउँमा आएका केही कलाकारसँग मिलेर केही फरक काम गर्दै थिए। गाउँमै उपलब्ध...	जिन्दगीको ओखतीपरदेशीले बाटो नाप्यो छाप छाडेर पाउकोकोइ छौ कि औषधी गर्ने जिन्दगीका घाउकोसुदूरपश्चिममा युगौदेखि सुनिँदै आएका कतिपय...	घरभित्रै क्रान्तिशितलहर परेर बाहिर मौसम साह्रै चिसिएको छ। 'मैले लगाउन मिल्ने कपडा र जुत्ता ल्याउन नभुल्नु है...	भर्खरै...